Utholakale nama-ARVs udokotela oboshelwe ukukhwabanisa – LIVE Express
Udokotela osolwa ngokukhwabanisa ubanjwe nenqwaba yemishanguzo yokuthiba igciwane lengculazi, ama-ARVs, kulandela ukuboshwa kwakhe.
Lo msolwa oneminyaka engama-44 ubudala, uboshwe ngoMsombuluko esendaweni asebenzela kuyona, i-Rethabile Clinic, e-Polokwane, e-Limpompo, ngezinsolo zokukhwabanisa kanye nokweba.
Kusolakala ukuthi ubenomkhuba wokuthenga isidakamizwa esithengwa ngencwadi kadokotela esebenzisa incwadi ewumgunyathi, nokuwumkhuba okusolakala ukuthi ubesewugile isikhathi esingaphezu kweminyaka emibili.
“Lo dokotela kusolakala ukuthi ubethenga i-morphine kusukela ngo-2015, esebenzisa isitembu somunye udokotela, i-signature engumbombhayi kanye ne-letterhead yakwa-Department of Health esifundazweni,” kubeka okhulumela ama-Hawks esifundazweni, u-Captain Matimba Maluleke.
uMaluleka uthi amaphoyisa aseshe indlu yomsolwa nalapho evundulule amabhodlela ayi-35 anamaphilisi, ama-ARVs, isitembu sikadokotela kanye nezinye izinto okukholakala ukuthi zatshontshwa emnyangweni wezempilo.